LokaChantha: March 2011
သင်္ကြန်မှာ ‘သင်’ကျန်မနေအောင် - အရှင်နန္ဒဝံသ
နှစ်ဟောင်းကုန်ပျောက်လို့ နှစ်သစ်ဆီသို့ ရောက်လာပြီဆိုရင် နှစ်ဦးကို ရွှင်မြူးစွာ ကြိုဆိုကြတဲ့ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်တွေကို ကျင်းပလေ့ရှိတဲ့အထဲမှာ မြန်မာတို့လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံအသီးသီး လူမျိုးအထွေထွေမှာ မိမိတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ရိုးရာနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံအရ လက်ခံအသုံးပြုကြတဲ့ သက္ကရာဇ် ပက္ခဒိန် ကွဲချင် ကွဲပါမယ်။ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်တွေ ကျင်းပလေ့ရှိတတ်တာကတော့ တူညီတဲ့ အလေ့အထ တစ်ခုပါပဲ။
ခုလည်းပဲ မြူးကြွပြီး အထူးရသပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ သင်္ကြန်သီချင်းသံများက လေထဲမှာ လွင့်ပျံလာမှုနဲ့အတူ သင်္ကြန်ကို ကြိုတဲ့ မိုးစက်ငယ်တို့ရဲ့ မြေထက် ကြွေသက်လာဟန်တွေက သင်္ကြန်ကို အမှတ်ရစေပြန်တယ်။
ဒီတော့လည်း တစ်နှစ်ကုန်ပျောက်လို့ နှစ်သစ်တစ်ခုတောင်မှ ရောက်တော့မှာပါလားဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့အတူ မြန်မာတို့ရဲ့ ရိုးရာနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ သင်္ကြန်ကို အာရုံပြုမိလိုက်ပြန်ပါတော့တယ်။
ဝေးခဲ့တာကြာ ... ဒီအခါ
‘ခါသုံးကောင်၊ တစ်ကောင် အမိဖမ်း’ တဲ့။
ရှေးက ထားခဲ့တဲ့ လူကြီးသူမတို့ရဲ့ စကားပေါ့။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ‘သင်္ကြန်’၊ ‘ဝါဆို’၊ ‘သီတင်းကျွတ်’ အခါရယ်လို့ ရက်မြတ်မဟာအခါကြီး သုံးခုရှိပါတယ်။
အဲဒီ အခါနေ့ရက်များ ရောက်လာပြီဆိုရင် မိမိတို့နဲ့ နီးစပ်ရာ ကျောင်းကန် ဘုရားများဆီသို့ အရောက်သွားပြီး ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာထဲမှ အားသန်ရာ အမှုတွေကို သူ့ထက်ငါ အလုအယက် ပြုလုပ်အားထုတ်လေ့ရှိပုံတွေက ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့မှ မတူတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုလို့ ထင်ပါတယ်။
စတုဒိသာလှူဒါန်းသူ၊ သီတင်းသီလ စောင့်ထိန်းသူ၊ တရားဘာဝနာကို ဟော,နာ,ကျင့်ကြံသူတွေနဲ့ နာမည်ကြီး တန်ခိုးကြီး ဘုရားတိုင်းမှာ တိုးမပေါက်အောင်လည်း စည်ကားမြဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ အခါသုံးမျိုးထဲက လူမျိုး ဘာသာ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးငယ် မရွေး အမြဲတောင့်တ သတိရ ပျော်ရွှင်လေ့ရှိတဲ့ အခါကို ပြပါဆိုရင် သင်္ကြန်အခါကို ပြရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ခုတော့လည်း ဒီအခါတွေဟာ စာရေးသူနဲ့ ဝေးခဲ့တာ ကြာခဲ့ပါပြီ။
သြော် ... ဘာလိုလိုနဲ့ နာရီတိုက်စား ရာသီများရဲ့ အောက်မှ တစ်နှစ်ကုန် တစ်နှစ်ကူးတဲ့ လတန်ခူးတောင် ရောက်လာပြန်ပြီပေါ့။
မုတ်သုန်လေညင်း တိုက်ခတ်ခြင်းနဲ့အတူ မိုးပေါက်မိုးစက်တို့လည်း မြေထက်မှာ ကြွေသက်စ ပြုလာတာ တွေ့ရတော့ မကြာမီ နွေဦးရာသီရောက်တော့မှာပါလားလို့ တွေးမိလိုက်ပါတယ်။
ဇာတိဌာနေ မြန်မာပြည်မှာတော့ ဆောင်းကုန်လို့ နွေကို ကူးဖို့ လေရူးတသုန်သုန် မြူးတဲ့အချိန်လို့ အောက်မေ့မိတယ်။
ဥသြငှက်ငယ်လေးတွေရဲ့ နွေကြိုတေးသံနဲ့ ... ဝဿန်ဦးမို့ ပွင့်ဖူးလာကြဦးမယ့် ပန်းလေးတွေရဲ့ အလှတွေက ဒီတန်ခူးလကို သာယာလှပအောင် အလှဆင်နေကြတော့မယ် ထင်ပါရဲ့။
နှစ်သစ်ကို ကြိုဖို့ ပွင့်လာသလားပင် ထင်ရလောက်တဲ့ ပိတောက်ပန်းရနံ့လေးတွေကလည်း လေထဲမှာ သင်းပျံ့မွှေးကြိုင် ရနံ့လှိုင်စ ပြုလောက်ရောပေါ့လို့ တွေးသိ ခံစားရပါတယ်။
မြေပျော့လျှင် ခြေရာထင်သကဲ့သို့ စိတ်ထားနုလို့များ လွမ်းစိတ်ဝင်မိသလားပင် မသိပါဘူး။
နှလုံးသားဓာတ်ခံနုသူတို့အဖို့မှာတော့ ပျော်စရာတွေကပင် လွမ်းစရာတစ်ခုအသွင် ဖြစ်ပေါ် ခံစားတတ်တာလည်း ဓမ္မတာပဲ ထင်ပါရဲ့။
ခုလည်းပဲ သင်္ကြန်တေးသံစုံကို နားယံမှာ ကြားရပြန်တော့လည်း ရင်ထဲတစ်မျိုး နေရတာဆိုးသလိုပဲပေါ့။
ဘယ်ကိုတမ်းတ သတိရမိတယ်လို့ အမည်မဖော်ပြနိုင်တဲ့ ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရပြီးသော သင်္ကြန်ပေါင်းများစွာရဲ့ အစွမ်း ထင်ပါရဲ့ ... နော်။
ခုတလော ... အင်တာနက်သတင်းတွေ ဖတ်တဲ့အခါမှာလည်း မြန်မာ့ရိုးရာ နှစ်သစ်ကူး အတာသင်္ကြန်ပွဲတော်ဆိုင်ရာ သတင်းလွှာတွေ ဖတ်နေရတယ်။
တချို့ကလည်း ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေ ကျင်းပဖို့ဖြစ်သလို၊ တေးသီချင်း ဗွီဒီယို အက,အလှ ကြော်ငြာတွေပါပဲ။
တချို့ကျတော့လည်း အဲဒီသင်္ကြန်အခါ ရက်မြတ်မဟာမှာ သာသနာ့ဘောင် ဝင်ကြပြီး ဘဝအနှစ်သာရ ထုတ်ယူကြမည့်အကြောင်း သတင်းကောင်းတွေပေါ့။
‘ဒါန’ဆိုတဲ့ မြေပေါ်မှာ ‘သီလ’တိုင်ထူကာ ‘ဘာဝနာ’နဲ့ ခေါင်အုပ်ကြပြီး၊ ခေါင်ချုပ်အလုပ် လုပ်ကြမယ့် သူတွေကလည်း ဒီရက်မြတ်အခါကို မျှော်လင့် အားခဲနေကြဟန် တူပါရဲ့လေ။
ထို့အတူ လူငယ်မောင်မယ်တို့မှာလည်း တီးဖိုဆိုဖို့ ကဖို့လှဖို့အတွက် ဝါသနာတူရာ စုစည်းကာဖြင့် အကတွေ တိုက်ကြ၊ အဆိုတွေ ကျင့်ကြနဲ့ သင်္ကြန်ကို အပျော်ဖြင့် မျှော်လင့်နေချိန်လို့ အောက်မေ့မိတယ်။
ဒီလို သတင်းကြော်ငြာတွေကနေ မြန်မာ့ရိုးရာ ရက်မြတ်မဟာ အတာသင်္ကြန်အတွက် က,ဆို,တီးဟန်နဲ့ ဓမ္မအသံတွေ နားယံမှာ စုံနေအောင် ကြားရတဲ့အခါ လူသားတွေနဲ့အပြိုင် စာရေးသူတို့လို သာသနာပျော် ရဟန်းတော်တို့ရင်ထဲမှာလည်း အပျော်တွေ ပူးဝင် ခံစားခဲ့ရပြန်ပါတယ်။
တဆက်တည်းမှာပဲ သင်္ကြန်နဲ့ ဆက်စပ်ပြီး စာရေးသူ အတွေးဝင်မိတာလေးတွေကို ချရေးကြည့်လိုက်ပြန်ပါတယ်။
သူများက ‘သင်္ကြန်’ပြောလို့ ပြောနေရတယ်။
တကယ်တော့ သင်္ကြန်ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို နားမလည်ခဲ့တာ အမှန်ပါ။
စာပေမှာတော့ ‘ပြောင်းရွှေ့ခြင်း’ကို ‘သင်္ကြန်’လို့ ခေါ်ဆိုကြောင်း သိရတယ်။
အချင်း ယူဇနာ ၅၀၊ လုံးဝန်း ယူဇနာ ၁၅၀ ရှိပြီး အတွင်းဘက်ကား ရွှေ၊ အပြင်ဘက်ကား ဖလ်သားအတိနဲ့ ပြီးသော ‘ဘာဏုရာဇာ’မည်တဲ့ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်မင်းဟာ နဝင်းတစ်လုံးမှ နေပြီး နဝင်းတစ်လုံးဆီ၊ နက္ခတ်တစ်လုံးမှ နက္ခတ်တစ်လုံးဆီ၊ တစ်ရာသီမှ တစ်ရာသီသို့ အစဉ်လိုက် ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကို အစွဲပြုလို့ သင်္ကြန်ခေါ်ဆိုကြောင်း လောကီကျမ်းများအရ သိရတယ်။
တစ်နှစ်တစ်ခါ ထုတ်ဝေတဲ့ သင်္ကြန်စာများမှာတော့ ဗြဟ္မာမင်းကြီးရဲ့ ဦးခေါင်းကို လွှဲပြောင်းပေးနေပုံကို ဖော်ပြလေ့ရှိတာ သတိပြုမိပါတယ်။
သင်္ကန္တ (သင်္ကြန္တ) ဆိုတဲ့ ပါဠိကနေ ဆင်းသက် ရွေ့လျားလာလို့ သင်္ကြန်လို့ ခေါ်တယ်။
ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို ဆောင်တယ်လို့ သိရပြီးပါပြီ။
ဒါဆို ဘာတွေ ဘယ်လို ပြောင်းရွှေ့သလဲ? ... စဉ်းစားကြည့်ကြရင် အဆိုးနဲ့အကောင်း တစ်လှည့်စီ ပြောင်းပြန် ပြောင်းနေတာလား၊ အကောင်းကနေ အဆိုးဘက်ဆီ ပြန်ပြောင်းတာလားတော့ ခွဲခြား မသိပါ။
ဒီပြောင်းရွှေ့ခြင်းဆိုတာဟာ အဟောင်းကနေ အသစ်ဆီ၊ အဆိုးကနေ အကောင်းဆီ၊ တစ်နှစ်မှသည် တစ်နှစ်ဆီသို့ ပြောင်းရွှေ့တာကို ဆိုလိုတာဖြစ်နိုင်သလို အရှူံးမှသည် အနိုင်ဆီ၊ အမုန်းမှသည် အပြုံးဆီ၊ ဆင်းရဲမှသည် ချမ်းသာဆီသို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကို ဆိုလိုတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဘာပဲပြောပြောပေါ့။ စီးပွားရေး, ပညာရေး, လူမှုရေးတွေမှာ တစ်နှစ်လာလည်း ဒီအတိုင်း၊ တစ်နှစ်လာလည်း ဒီအတိုင်းဆိုရင် နှစ်သစ်ကူး သင်္ကြန်ပွဲတော်ဟာ မိမိအတွက်တော့ ဘာမှ ထူးမည် မထင်တော့ပါ။
ပြောင်းလဲနေတာ အမှန်ပဲ။ ဘာတွေ ဘယ်လိုပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာသာ မိမိတို့ သိဖို့ လိုအပ်တာ ဖြစ်မယ်လို့ တွေးမိတယ်။
ဓမ္မသဘောအရဆိုရင်လည်း ရုပ်တရား၊ နာမ်တရားတွေဟာ စက္ကန့်မလပ် တရစပ် ဖြစ်လိုက် တည်လိုက် ပျက်လိုက် သဘောရှိနေတော့ အမြဲတမ်း ပြောင်းလဲနေတယ် မဟုတ်လား။
ဥပမာ ... ငယ်စဉ်က ရှိခဲ့တဲ့ မိမိတို့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ရေ လှပတင့်တယ်ခြင်းတွေဟာ အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါ မရှိတော့တာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ပဋိသန္ဓေနေခြင်းကနေ အိုခြင်းဆီ၊ အိုခြင်းကနေ နာခြင်းဆီ၊ နာခြင်းကနေ သေခြင်းဆီသို့ ပြောင်းနေတာ ထင်ရှားလှပါတယ်။
ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ သေချာ ရှုကြည့်မှ သိနိုင်တဲ့အရာမို့ အများသူငါ သတ္တဝါတွေဟာ ခန္ဓာရဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို မသိနိုင် ဖြစ်နေကြတာပါ။
ဒီလိုဆိုရင် ခန္ဓာငါးပါး ရုပ်နာမ်နှစ်ပါးတို့ရဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ သိချင်ရင်တော့ တရားထိုင်ဖို့ လိုတယ်လို့ တွေးမိတယ်။
ဒီအပြင်လည်း သင်္ကြန်ဆိုတာ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းလို့ သဘောပေါက်ထားသူများဟာ ပြောင်းလဲသင့်သည်များကို ပြောင်းလဲပစ်ရမယ်ဆိုတာ သိစေချင်ပါတယ်။
ဓာတ်ခံကောင်းမှ လာဘ်ကံကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားအရဆိုရင် ဆိုက်ရောက်လာမယ့် နှစ်သစ်မှာ လာဘ်ကံကောင်းလိုသူတိုင်းဟာ ဓာတ်ခံကောင်းထားဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဓာတ်တူနံတူ ဆေးဖက်ယူလို့ ရှေးသူတော်စင်တို့ အမှာစကားက ဒီနေရာမှာ ဒါကိုများ ဆိုသလား တွေးစရာပါ။
ဒါကြောင့် နှစ်သစ်မှာ လာဘ်ကံကောင်းလိုသူတိုင်းဟာ မိမိတို့ နှလုံးသားဖြူစင်ပြီး စိတ်ထားမွန်မြတ်ခြင်းဆိုတဲ့ ဓာတ်ခံကောင်းနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
တကယ်လို့သာ ဓာတ်ခံညံ့နေရင်လည်း အကောင်းနဲ့ ပြန်ပြောင်း လဲလိုက်ရမှာပေါ့။
ဒါကြောင့် မပြေလည်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နေပြီး လောကအလယ်မှာ မျက်နှာငယ်နေပါသလား။
ပြေလည် ကောင်းမွန်လာအောင် လာဘ်ကံတွေ ကောင်းဖို့ ဓာတ်ခံတွေကို ပြောင်းပေးကြည့်ပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် ဘယ်လို ဘာကို ဘာနဲ့ ပြောင်းမလဲ
အကြောင်းကြောင့် အကျိုးဖြစ်တယ်လို့ ခံယူထားတဲ့ ဗုဒ္ဓဝါဒမှာ အကြောင်းနဲ့ ကင်းပြီး ဖြစ်တည်လာတာ မရှိတာ အမှန်ပါ။
ဒါဆိုရင် ကံကောင်းနေသူတွေဟာ ကံကောင်းနိုင်ကြောင်း အမှုတွေ ပြုခဲ့လို့ ဖြစ်သလို ကံဆိုးနေသူတွေဟာလည်း ကံဆိုးနိုင်ကြောင်း မကောင်းမှုတွေ ပြုခဲ့လို့ပဲ ဖြစ်မှာပါ။
အကြောင်းကောင်းရင် အကျိုးကောင်းမယ်၊ အကြောင်းဆိုးရင် အကျိုးဆိုးမယ်ဆိုတာ ယုံမှားစရာ မရှိပါဘူး။
လူတိုင်း ကံကောင်းချင်ကြပေမယ့် ကောင်းကံ(ကုသိုလ်)လုပ်ဖို့ကြတော့ ဝန်လေးတတ်ကြပါတယ်။
ကံကောင်းချင်ကြပေမယ့် မကောင်းကံအပြုများသူများမှာတော့ ကံကောင်းချင်လျက် ကံဆိုးနေကြအုန်းမှာပါ။
ဒါဆိုရင် ကံကောင်းချင်သူတို့ ကောင်းကံလုပ်ဖို့ လိုမယ်ဆိုတာ သိသာပါတယ်။
ထို့အတူ ကံမကောင်း အကြောင်းမလှလို့ ကြိုးစားသမျှ သဲထဲရေသွန်သလို ဘာမှအရာမထင်ဖြစ်နေသူများဟာလည်း ကောင်းမှု(ကုသိုလ်)လို့ အမည်တတ်ထားတဲ့ အရာတွေကို ပြောင်းလဲ လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် ရက်မြတ်မဟာ အတာသင်္ကြန်ကာလအတွင်းမှာ ဆင်းရဲခြင်းကို ဒါနပြုပြီး ချမ်းသာခြင်းဆီရောက်အောင် ပြောင်းရပါမယ်။
သီလလို့ ခေါ်ဆိုတဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား ဖြူစင်အောင် ကျင့်ကြံပြီးတော့ မကျန်းမမာ ရောဂါထူပြော စိတ်ဆင်းရဲမှုသဘောကို ကိုယ်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာအောင် ပြောင်းရပါမယ်။
အကောင်းနဲ့အဆိုး အကြောင်းနဲ့အကျိုးကို မှန်ကန်စွာ မသိ နားမလည်ခြင်းဆိုတဲ့ ဉာဏ်ပညာနည်းခြင်းကို ဘာဝနာပွားပြီး ဉာဏ်ပညာအားကြီးအောင် ပြောင်းယူရပါမယ်။
အကျဉ်းချုပ်ရရင် မကောင်းတာကို ကောင်းတာနဲ့ ပြောင်း၊ ညစ်တာကို သစ်တာနဲ့ ပြောင်း၊ ဒုစရိုက်ကို သုစရိုက်နဲ့ ပြောင်း၊ အကုသိုလ်ကို ကုသိုလ်နဲ့ ပြောင်းရင် လူတိုင်း ကံကောင်းလာမယ်လို့ တွေးမိပါတယ်။ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဆိုတဲ့ သင်္ကြန်ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဟာလည်း လူတိုင်းမှာ အနှစ်သာရရှိရှိ ပြည့်ဝသွားမယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။
ကျေးလက်တောရွာတွေမှာ ကြက်တွေ ဘဲတွေဟာ သဘာဝအားဖြင့် ဥအုပြီး သားပေါက်လေ့ ရှိပါတယ်။
ကြက်မ ဘဲမကြီးတွေဟာ ကျေနပ်လောက်အောင် အုပြီးတဲ့အခါ ဥကလေးတွေက အကောင်ပေါက်လာအောင် ဝပ်ကျင်းမှာ ဝပ်ပြီး ကိုယ်ငွေ့ပေးလေ့ ရှိပါတယ်။
အချိန်တန်တဲ့အခါ ဥလေးတွေကနေ သားပေါက်လာပြီး ကြက်ပေါက်စ ဘဲပေါက်စလေးတွေ ဖြစ်လာတာပေါ့။
ဒါပေမယ့် အကောင်မပေါက်ဘဲ ကျန်နေတဲ့ ဥတွေလည်း ရှိတတ်ပါသေးတယ်။
အဲဒီလို ကျန်နေတဲ့ ဥတွေကို ‘ဒင်းကျန်ဥ’တွေလို့ ခေါ်ဆိုတာ မှတ်သားဖူးတယ်။
သားမပေါက်တဲ့ အဲဒီလို ဥတွေဟာ ကြာလာတာနဲ့အမျှ အမှိုက်ပုံလွှင့်ပစ်ခံရပြီး ခွေးစားခံ ဖြစ်သွားကြတာပေါ့။
ဒီလိုပါပဲ။ လူတိုင်းရဲ့ ဘဝမှာ အကျိုးပေးဖို့ အခွင့်ရေးပေးဖို့ စောင့်နေတဲ့ အတိတ်က ပြုဖူးတဲ့ ကုသိုလ်ကံထူးတွေ ရှိနေတတ်ကြပါတယ်။
ဒီကံတွေဟာ ကံပိုင်ရှင်ရဲ့ ကုသိုလ်ပြုခြင်းဆိုတဲ့ အပူပေးမှုကို မျှော်လင့်နေကြတာပေါ့။
ကြောင်းကျိုးမြင်သိပြီး မိဘဆရာသမားတို့ရဲ့ စကားကို လိုက်နာပွားသူတွေကတော့ လိုအပ်သလို ဒါန သီလ ဘာဝနာစတဲ့ ကုသိုလ်ထူးတွေ ဆည်းပူးကြပြီး အပူပေးလိုက်တော့ ဟော ... ချမ်းသာခြင်း, ကျန်းမာခြင်း, အသိပညာနဲ့ ပြည့်စုံခြင်း စတဲ့ ကောင်းကျိုးတွေ ပေါက်ဖွားလာတာပေါ့။
ဒါကြောင့် ကောင်းကျိုးလိုလားပြီး ကံကောင်းလိုသူတိုင်းဟာ လက်ရှိဘဝကို ကုသိုလ်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အပူပေးသင့်ပါတယ်။
သို့သော်လည်း ကုသိုလ်ကံ အပူပေးရမယ့်အစား တချို့သော ကာယကံရှင်တွေဟာ မေ့မေ့လျော့လျော့ ပေါ့ပေါ့ဆဆ နေလိုက်ကြတယ်။ ဒါ့အပြင် ငါးပါးအာရုံ ကာမဂုဏ်လိုက်စားကာ မိုက်မှားနေကြလေသေးတော့ ပြုခဲ့ဖူးသမျှ ကုသိုလ်ကံတွေဟာ အကျိုးပေးချင်ပါလျက်နဲ့ အကျိုးပေးခွင့်မသာ ဖြစ်နေရှာတော့တယ်။
ဘာမှ ပေါက်ဖွား တောက်ကြွား မလာနိုင်တော့ဘဲ ‘ဒင်းကျန်ဥ’သဖွယ် အဟောသိကံ ဖြစ်သွားရတော့တာပေါ့။
နောက်ဆုံးတော့ မရှိတော့ မလှူ၊ မလှူလို့ မရှိနဲ့ ဒါနလည်း မပြုနိုင်၊ သီလလည်း မစောင့်နိုင်၊ ဘာဝနာလည်း မပွားနိုင်တော့ ဆင်းရဲတဲ့ ဒုက္ခကနေ သုခဆီ မပြောင်းလဲနိုင် ဖြစ်နေရပါတော့တယ်။
သူများတွေ ကြိုးစားသလောက် အရာရောက်လို့ ထွန်းပေါက်အောင်မြင်ပြီး ချမ်းသာနေချိန်မှာ မိမိကတော့ သမုဒ္ဒရာ ဝမ်းတစ်ထွာအတွက် ဆင်းဆင်းရဲရဲ ကြိုးစားနေရတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် သင်္ကြန်ကနေ ဒင်းကျန် ဖြစ်မသွားအောင်လည်း ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။
သင်္ကြန်မှာ ဒင်း ... ကျန်မနေခဲ့ပါစေနဲ့လို့ပဲ ဆိုပါရစေ။
အဆင်းလည်း လှ၊ ရနံ့လည်း သင်းမြတဲ့ ပန်းပေါင်းစုံတို့ဟာ ရှုဖွယ်မဆုံးတဲ့ ဥယျာဉ်တစ်ခုလုံးမှာ ပွင့်လန်းဝေဆာ ဖူးပွင့်နေမယ်ဆိုရင် အဲဒီဥယျာဉ်ကြီးဟာ သာယာ လှပနေမှာပါပဲ။
ဥယျာဉ်ကြီးက သာယာလှပတာနဲ့အမျှ ကောင်းသတင်းတွေကလည်း ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး ပျံ့လွင့်ဖုံးနေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီဂုဏ်သတင်းတွေနဲ့ သင်းပျံ့မွှေးကြိုင် ရနံ့လှိုင်နေတဲ့ ဒီဥယျာဉ်ကြီးမှာ ဖြူပြာနီဝါ ရောင်စုံဖြာတဲ့ ငှက်ကျေးသာရကာအပေါင်းတို့နဲ့အတူ ဝတ်ရည်စားသုံး ပျား, လိပ်ပြာ, ပိတုန်းတို့ကလည်း ဝတ်ရည်ကို စားသုံးရင်း ပျော်မဆုံး ဖြစ်နေကြမှာပေါ့။
ဒီလိုပါပဲ။ ဘဝဆိုတာ ဥယျာဉ်ကြီး တစ်ခုပမာလို တင်စားဆိုရရင် ဒီဥယျာဉ်ကြီးဟာ ကောင်းမြတ်တဲ့ ဂုဏ်သတင်းတွေနဲ့ လောကကြီးအတွင်းမှာ ပျံ့သင်းနေသင့်တယ် မဟုတ်လား။
မိမိရဲ့ ဘဝဥယျာဉ်တွင်းမှာ ဒါနပန်း၊ သီလပန်း၊ ဘာဝနာပန်းတွေ တနည်းအားဖြင့် အမည်ပေါင်းစုံနဲ့ ကုသိုလ်ပန်းတွေသာ ပွင့်လန်းနေမယ်ဆိုရင် ဒီကုသိုလ်တွေရဲ့ ဂုဏ်သတင်းရနံ့ သင်းပျံ့ကျော်ဇောမှုတွေကလည်း လောကထဲ လွှမ်းထုံနေမှာ အမှန်ပဲ။
ဒီအကျိုးကြောင့် ရာထူးဂုဏ်ရှိန်နဲ့ ဥစ္စာစည်းစိမ် ကြွယ်ဝပြီး ဂုဏ်ကျက်သရေ အဖြာဖြာနဲ့ ပိုပြီး ပြည့်စုံလာနိုင်ပါတယ်။
ပန်းရှိတော့ ပန်းချစ်တတ်သူ လာသလို ဂုဏ်ရှိတော့လည်း ဂုဏ်ကို တန်ဖိုးထားသူတွေ လာကြလို့ ဟော ... ဘဝဥယျာဉ်ကြီးဟာ ဂုဏ်သိက္ခာ ကျက်သရေ မင်္ဂလာရှိသူတွေနဲ့ ပြည့်စုံနေတော့မှာပေါ့။
ဒီလိုဆိုရင် ရက်မြတ်မဟာ နှစ်သစ်ကူး အတာသင်္ကြန်အခါရက်များဟာ မိမိအတွက် ကုသိုလ်ကံ အဆင်းရနံ့တွေ သင်းပျံ့ကျန်နေအောင် ကြိုးစားပြီး နေသင့်တဲ့ ကာလလို့ အောက်မေ့မိတယ်။
ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်း ထားပြီး မကောင်းတာတွေကို မကြံစည် မပြောဆို မပြုလုပ်သင့်ဘူး။ ကောင်းတာတွေကိုသာ ရွေးချယ် ကြံစည် ပြောဆို ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဒါနစတဲ့ ကုသိုလ်ကံပန်းတွေ မိမိဘဝဥယျာဉ်မှာ ပွင့်လာ တည်လာ မှီလာအောင် ကြိုးစားသင့်တယ်လို့ ခံယူမိတယ်။
အဲဒီလိုသာ ဘဝဥယျာဉ်ကြီးမှာ ဒါန အစရှိတဲ့ လူတို့ရဲ့ ကုသိုလ်ကံ ပန်းပွင့်တွေနဲ့ ကြွားကြွားဝင့်ဝင့် ငွားငွားစွင့်စွင့် ဖူးပွင့်ဝေဆာနေမယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ ဒီဘဝဥယျာဉ်ကြီးဟာ ဂုဏ်ကျက်သရေ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ခညောင်းပြည့်စုံမယ်၊ မိမိသူတပါး နှစ်ဦးသားအတွက် အကျိုးများမယ်၊ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ဂုဏ်ရနံ့သတင်းတွေနဲ့ လောကအတွင်း ထာဝစဉ် ပျံ့သင်းနေတော့မယ်။
ဝတ်ရည်စားသုံး ပျားပိတုန်းနဲ့တူတဲ့ အထက်တန်းလွှာ သူဌေးသူကြွယ်တွေနဲ့ ပေါင်းသင်းမိလို့ စီးပွားဖြစ်မယ်။ သူတော်ကောင်းတွေက ချီးမြှောက်ကြလို့ ကောင်းစားမယ်။ စိတ်နှလုံး အေးမြမယ်။
ဒါဆိုရင် ဒီသင်္ကြန်ဟာ သင့်အတွက်တော့ ‘သင်း’ကျန်ဖြစ်သွားတော့မယ် ထင်ပါတယ်။
ဒီတော့ နှစ်သစ်ကူးစ သင်္ကြန်ကာလအတွင်းမှာ စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့ ယှဉ်ပြီး ပြုလုပ်အားထုတ်ကြတဲ့ ဒါန, သီလ, ဘာဝနာ စသော ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေဟာ သင့်ကို လောကကြီးရဲ့ ဆင်းရဲတွင်းမှာ ကျန်မနေအောင် ဆွဲတင်ဆွဲထုတ်မှာပါ။
ရောဂါထူပြော ဒုက္ခတောမျာ သင်ကျန်မနေအောင်၊ ဘေးရန်ထူပြောတဲ့ လူမှုအရှုပ်တောမှာ သင်ကျန်မနေအောင် ဆွဲတင်မှာပါ။
အဲဒီလို ကောင်းမှုကံတွေက မြင့်ထက်မြင့်ရာကို ဆွဲတင်တဲ့အခါ သင်ကျန်မနေအောင်ဆိုရင် သင်္ကြန်မှာ “မကောင်းမှု ရှောင်၊ ကောင်းမှု ဆောင်”လို့ “ဖြူအောင် စိတ်ကို ထားကြပါစို့”လို့ တိုက်တွန်း နှိုးဆော်ရင်း လူတိုင်းအတွက် ကောင်းမြတ်တဲ့ ဂုဏ်သတင်း ရနံ့နဲ့ ‘သင်း’ကျန်နေမယ့် သင်္ကြန်ပွဲတော်ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလျက် စာရေးသူရဲ့ ရင်တွင်းက အတွေးတစ်စကို ရပ်နားလိုက်ပါရစေ။
Posted by LokaChantha at 2:40 PM No comments:
နယူးယောက်မြို့၊ လောကချမ်းသာဘုရားကျောင်း တစ်ရက်တာ တရားစခန်းပွဲကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လ (၂၆)ရက် စနေနေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့၏။
တစ်လမှာ နောက်ဆုံး စနေနေ့တစ်ရက် တရားစခန်း ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်၏။
အမှုကိစ္စ အထွေထွေ မအားလပ်သည့်ကြားမှ၊ တနည်းဆိုသော် လောကီပစ္စည်းဥစ္စာများ ရှာဖွေခြင်းမှ လောကုတ္တရာပစ္စည်းဥစ္စာများကို ရှာဖွေ စုဆောင်းကြခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
တနည်းဆိုသော် အိုတတ် နာတတ် သေတတ်သော ပစ္စည်း ဥစ္စာများ ရှာဖွေခြင်းမှ အအို အနာ အသေကင်းသော ပစ္စည်း ဥစ္စာ ရှာဖွေခြင်းသို့ ဦးလှည့် ခေါင်းပြောင်းကာ ရှာဖွေခြင်းပင် ဖြစ်ပေသည်။
တစ်နေ့တစ်လံ ပုဂံဘယ်ပြေးမလဲဟု ဆိုရိုး ရှိ၏။
သို့ ဆိုရိုးရှိလင့်ကစား တစ်နေ့တစ်လံမှ မလျှောက်လှမ်းသူအတွက် ပုဂံနန်းမြို့ဆီသို့ ရောက်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
ပုဂံနန်းမြို့ဆီသို့ ရောက်လိုသူတိုင်း တစ်နေ့တစ်လံ မှန်မှန် လျှောက်လှမ်းကြရပါမည်။
လောကုတ္တရာ ပစ္စည်းဥစ္စာ ရတနာများ ရှာဖွေ စုဆောင်းထားသူ မဟုတ်ပါလျှင် ထိုလောကုတ္တရာ ရတနာဥစ္စာနှင့်မှ လဲလှယ်ယူရသည့် နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသော တန်ဖိုးကြီးစွာ အမြတ်ရတနာကို အဘယ်သို့ ရနိုင်မည်နည်း။
အားလည်း မအား၊ နားလည်း မနားရဘဲ နိစ္စဓူဝ (နေ့တဓူဝ) လောကသံသရာ အလုပ်ခွင်ထဲ တဝဲလည်လည် လည်ရင်း ဒီလိုနဲ့ပဲ သင့်ဘဝ မိမိဘဝ အချိန်ကုန်စေမည်လား?
တိုတောင်းလှသော လူ့ဘဝ၊ ကြုံခဲလှသော သာသနာနှင့် တွေ့ကြုံဆုံခိုက်မှာ သံသရာလွတ်လမ်း ပါရမီအမြိုက်စခန်းမှာ လျှောက်လှမ်းဖို့ လောကချမ်းသာတရားစခန်းဆီသို့ လျှောက်လှမ်းခဲ့ကြပါဟု ဓမ္မယောဂီအပေါင်းအား အသိပေး နှိုးဆော်လိုက်ရပါသည်။
လစဉ် နောက်ဆုံး စနေနေ့ တရားရှုမှတ်ခြင်း အစီအစဉ်
နံနက် ၈း၀၀ မှ နံနက် ၉း၁၅ - သီလယူ၊ အလုပ်ပေးတရား၊ ထိုင်မှတ်
နံနက် ၉း၁၅ မှ နံနက် ၁၀း၀၀ - စင်္ကြန်လျှောက်မှတ်
နံနက် ၁၀း၀၀ မှ နံနက် ၁၀း၄၅ - ထိုင်မှတ်
နံနက် ၁၀း၄၅ မှ နေ့လယ် ၁၂း၀၀ - နေ့လယ်စာ*၊ သန့်ရှင်းရေး (စားရင်း, ပြုရင်း ရှုမှတ်)
နေ့လယ် ၁၂း၀၀ မှ မွန်းလွဲ ၁း၀၀ - စင်္ကြန်လျှောက်မှတ်
မွန်းလွဲ ၁း၀၀ မှ မွန်းလွဲ ၂း၀၀ - ထိုင်မှတ်
မွန်းလွဲ ၂း၀၀ မှ မွန်းလွဲ ၃း၀၀ - စင်္ကြန်လျှောက်မှတ်
မွန်းလွဲ ၃း၀၀ မှ ညနေ ၄း၀၀ - တရားစစ်, တရားဆွေးနွေး
ညနေ ၄း၀၀ မှ ညနေ ၄း၃၀ - စင်္ကြန်လျှောက်မှတ်
ညနေ ၄း၃၀ မှ ညနေ ၆း၀၀ - အပတ်စဉ် စနေနေ့ တရားပွဲ
*နေ့လယ်စာအတွက် မိမိထမင်းဗူး (သက်သတ်လွတ်) ယူဆောင်လာရပါမည်။ စုပေါင်း၍ ဘုရားဆွမ်းတော် ကပ်လှူခြင်း၊ ကျောင်းနေ သံဃာတော်များအား ဆွမ်းကပ်လှူခြင်း (အလှူရှင် မရှိလျှင်) ပြုလုပ်ပါမည်။
မည်သူမဆို အချိန်ပြည့် (နံနက် ၈ မှ ညနေ ၆) သော်လည်းကောင်း၊ သင့်လျော်ရာ အချိန်အပိုင်းအခြား အလိုက်သော်လည်းကောင်း လာရောက် ရှုမှတ်နိုင်ပါသည်။ ဣရိယာပုထ်တစ်ခုကို အချိန်ရှည်ကြာစွာ ရှုမှတ်လိုသူများ မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ရှုမှတ်နိုင်ပါသည်။
Posted by LokaChantha at 2:01 PM No comments:
အေဘီဘီအေ လစဉ် နောက်ဆုံး စနေနေ့ တစ်ရက် တရားစခန်း
Posted by LokaChantha at 3:40 PM No comments:
အခွင့်ခါကောင်း၌ အရေးကြီးဆုံး အလုပ်
မြတ်စွာဘုရား၏ သာသနာတော်၌ တွေ့ကြုံနေရတဲ့အခါမှာ အရေးအကြီးဆုံး လုပ်ငန်းက မိမိတို့သန္တာန်မှာ ‘သီလ’, ‘သမာဓိ’, ‘ပညာ’ ဆိုတဲ့ ဒီအကျင့်သုံးခု ပြည့်စုံအောင် အားထုတ်ဖို့ဟာ အရေးကြီးဆုံးပဲ။
‘သီလ’ဆိုတာ ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် လူများမှာ အောက်ထစ်ဆုံးအားဖြင့် ‘ငါးပါးသီလ’ (အာဇီဝဋ္ဌမကသီလ) ပြည့်စုံရမယ်။
ရဟန်းများမှာတော့ ပါတိမောက်သီလ ပြည့်စုံရမယ်။
ဒီသီလ ပြည့်စုံတယ်ဆိုရင် လူ့ဘဝ နတ်ဘဝ ကောင်းရာဘဝတွေ ရောက်ပြီးတော့ ကောင်းစား ချမ်းသာသွားနိုင်တယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီလောကီသီလလောက်နဲ့တော့ အပါယ်ဘေးက လုံးဝလွတ်ပြီလို့ စိတ်မချရသေးဘူး။
ဒါကြောင့် လောကုတ္တရာသီလနဲ့လည်း ပြည့်စုံအောင် အားထုတ်ရမယ်။
‘လောကုတ္တရာသီလ’ဆိုတာ မဂ်သီလ, ဖိုလ်သီလပဲ။
ဒီ မဂ်သီလ, ဖိုလ်သီလနဲ့ ပြည့်စုံသွားရင်တော့ အပါယ်လေးပါးကို ဘယ်တော့မှ မကျတော့ဘူး။
လူ့ဘဝ နတ်ဘဝဆိုတဲ့ ဘဝကောင်းတွေမှာချည်း ဖြစ်ပြီး အစဉ် ထာဝရ ကောင်းစား ချမ်းသာသွားတော့တာပဲ။
ဒါကြောင့် မိမိတို့သန္တာန်မှာ အဲဒီ မဂ်သီလ, ဖိုလ်သီလတွေနဲ့ ပြည့်စုံအောင် အားထုတ်ကြရမယ်။
တကယ်တမ်း အားထုတ်ရင် ပြည့်စုံလည်း ပြည့်စုံနိုင်ပါတယ်။
ဒီလို အခါကောင်းကြီးထဲမှာ အားမထုတ်မိဘဲ အဲဒီ မဂ်ဖိုလ်သီလထူးတွေနဲ့ လွဲသွားရမယ်ဆိုရင် အများကြီးပဲ ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းတယ်။
အကုသိုလ်ကံတွေက အခွင့်ရတိုင်း အကျိုးပေးပြီး အပါယ်လေးပါးကို ပစ်ချလိမ့်ဦးမယ်။
ငရဲ, တိရစ္ဆာန်, ပြိတ္တာဘုံတွေကို ရောက်ရောက်ပြီးတော့ အနှစ်သိန်းပေါင်းများစွာ သန်းပေါင်းများစွာ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ တွေ့ကြုံခံစားသွားရလိမ့်ဦးမယ်။
ဒါကြောင့် ယခုလို ဘုရားသာသနာတော်ကြီးနဲ့ တွေ့ကြုံနေရတဲ့အခါဟာ အဲဒီ လောကုတ္တရာ မဂ်ဖိုလ်သီလနဲ့ ပြည့်စုံအောင် အားထုတ်ဖို့ အချိန်ပဲ။
ပြီးတော့ ဒီ ‘မဂ်ဖိုလ်သီလ’ဆိုတာကလည်း သူ့ချည်းသက်သက် အားထုတ်လို့ဖြစ်တာ မဟုတ်ဘူး။
‘သမာဓိ’ဆိုတာက ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် စိတ်တည်ကြည်မှု၊ စိတ်ငြိမ်သက်မှုပါပဲ။
ပကတိစိတ်တွေက သွားချင်တိုင်း သွားနေတယ်။ ထိန်းထားလို့ကို မရနိုင်ဘူး။
သူ့ဟာသူ သွားချင်ရာ သွား၊ ရောက်ချင်ရာ ရောက်၊ စိတ်ကူးချင်ရာ ကူးနေတယ်။
အဲဒီလို စိတ်ကလေးတွေ သွားချင်တိုင်း မသွားနိုင်အောင် သမာဓိအာရုံတစ်ခုခုကို စူးစိုက်ပြီး အဖန်ဖန် နှလုံးသွင်းနေရမယ်။
ဒီလို နှလုံးသွင်းဖန်များတော့ စိတ်ကလေးက ကိုယ်နှလုံးသွင်းတဲ့ အာရုံထဲမှာသာ ငြိမ်ဝပ် ရပ်တည်နေပြီး နေတယ်။
ဒီသမာဓိကလည်း လောကီနဲ့ လောကုတ္တရာ နှစ်မျိုး ရှိတယ်။
ဒီနှစ်မျိုးထဲမှာ သမထဘာဝနာကို အားထုတ်ရင် ‘ရူပဈာန်, အရူပဈာန်’ဆိုတဲ့ လောကီဈာန် သမာဓိတွေကို ရသွားနိုင်တယ်။
ဒီဈာန်သမာဓိတွေနဲ့ ပြည့်စုံရင် အင်မတန် အသက်တမ်းရှည်တဲ့ ဗြဟ္မာ့ဘုံတွေကို ရောက်သွားနိုင်တယ်။
အဲဒီမှာ ရောက်ပြီးတော့ တစ်ကမ္ဘာ, နှစ်ကမ္ဘာ, လေးကမ္ဘာ, ရှစ်ကမ္ဘာ စသည်ဖြင့် ကမ္ဘာပေါင်း ရှစ်သောင်းလေးထောင်တိုင်အောင် အသက်ရှည်ပြီး တည်နေနိုင်တယ်။
ဒါပေမယ့် အသက်တမ်းကုန်တဲ့အခါကျတော့ အဲဒီဗြဟ္မာ့ဘဝက သေရပြန်တာပဲ။
သေပြီးတော့ လူ့ပြည် နတ်ပြည်ကို ပြန်ရောက်လာတယ်။
ဒီလို ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်း ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချည်း နေသွားမယ်ဆိုရင်တော့ ဘဝကောင်းတွေချည်း ဖြစ်သွားဖို့ပါပဲ။
ဒါပေမယ့် ကိလေသာက မကင်းသေးတော့ မကောင်းမှုကိုလည်း သူပြုမိဦးမှာပဲ။
ဒီတော့ အဲဒီမကောင်းမှုက အကျိုးပေးပြီး အပါယ်လေးပါးသို့လည်း ကျရောက်သွားနိုင်သေးတာပဲ။
ဒါကြောင့် ဒီလောကီ သမာဓိလောက်နဲ့ စိတ်မချရသေးဘူး။
လောကုတ္တရာသမာဓိနဲ့လည်း ပြည့်စုံအောင် အားထုတ်ရဦးမယ်။
‘လောကုတ္တရာသမာဓိ’ဆိုတာ မဂ်သမာဓိ, ဖိုလ်သမာဓိပဲ။
ဒီသမာဓိကလည်း ‘ပညာ’ပါ ပြည့်စုံမှ သူကလည်း ပြည့်စုံတာ။
ဒါကြောင့် ပညာကိုလည်း ပြည့်စုံအောင် အားထုတ်ရသေးတယ်။
ဒီပညာကလည်း လောကီနဲ့ လောကုတ္တရာ နှစ်မျိုး ရှိတာပဲ။
ယခုကာလမှာ လက်မှုပညာ, နှုတ်မှုပညာ အစရှိတဲ့ လောကရေးရာ အသိအလိမ္မာပညာတွေကိုလည်း လောကီပညာလို့ပဲ ခေါ်နေရတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီပညာမျိုးတွေကတော့ ဘာဝနာနဲ့လည်း မဆိုင်ဘူး။
ကုသိုလ်တရားရယ်လို့လည်း မုချ ကိန်းသေ မဟုတ်ဘူး။
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ ယခု သတ္တဝါတွေ အမြောက်အမြား သေကြေ ပျက်စီးအောင် လုပ်နေကြတာဟာ ဒီပညာတွေနဲ့ လုပ်နေကြတာပဲ။
လောဘ ဒေါသ အကုသိုလ်တွေနဲ့ လုပ်နေကြတာပဲ။
‘ပညာအစစ်’ဆိုတာကတော့ အကုသိုလ်ရယ်လို့ မရှိဘူး။ ကုသိုလ်ချည်းပဲ။
ဒါကြောင့် ‘လောကီပညာအစစ်’ဆိုတာကတော့ သတ္တဝါအများ ကောင်းစား ချမ်းသာရေးကို ကြံစည် သိမြင်တာရယ်၊ တရားကျမ်းဂန်အရာတို့မှာ သဘာဝကျကျ သိမြင်တာရယ်၊ ဝိပဿနာပညာရယ်၊ ဒီ သုတမယ, စိန္တာမယ, ဘာဝနာမယ အသိဉာဏ်ပညာတွေဟာ လောကီပညာအစစ်တွေပဲ။
ဒီလောကီပညာတွေနဲ့ ပြည့်စုံရင်လည်း ကုသိုလ်တွေ ဖြစ်ပွားပြီး ကောင်းစား ချမ်းသာသွားနိုင်တယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီလောကီပညာလောက်နဲ့လည်း အပါယ်လေးပါးကတော့ လုံးဝလွတ်ပြီလို့ မဆိုနိုင်သေးဘူး။
ဒါကြောင့် အပါယ်ဘေးက လုံးဝ လွတ်မြောက်ချင်ရင် ‘လောကုတ္တရာပညာ’နဲ့လည်း ပြည့်စုံအောင် အားထုတ်ရဦးမယ်။
‘လောကုတ္တရာပညာ’ဆိုတာ မဂ်ဉာဏ်, ဖိုလ်ဉာဏ်ပဲ။
ဒီမဂ်ဉာဏ်, ဖိုလ်ဉာဏ်ကို ရအောင် ဘာကို အားထုတ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် သီလ, သမာဓိ, ပညာဆိုတဲ့ ဒီအကျင့်သုံးမျိုးထဲမှာ ပညာအကျင့်ဆိုတဲ့ ဝိပဿနာဘာဝနာကို အားထုတ်ရမယ်။
ဒီပညာဘာဝနာက ပြည့်စုံသွားရင်တော့ သီလရော၊ သမာဓိရော၊ ပညာရော အကုန်လုံး တပါတည်း ပြည့်စုံသွားတော့တာပဲ။
ဒီပညာဘာဝနာက ဘယ်လိုအားထုတ်ရတာလဲ ဆိုလို့ရှိရင် မိမိသန္တာန်မှာ ထင်ရှားရှိတဲ့ ရုပ်တရား, နာမ်တရားတွေကို အမှန်အတိုင်း သိအောင် ခွဲစိတ်ပြီး ရှုရတာပါပဲ။
ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ “ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားတော်” မှ
Posted by LokaChantha at 3:38 PM No comments:
ဓမ္မာရုံ ယောဂီဆောင် ဆောက်လုပ်ရေး (၁၇-မတ်-၂၀၁၁)
Posted by LokaChantha at 4:10 PM No comments:
ဓမ္မသင်တန်းနှင့် ဆည်းဆာတရားပွဲ (၁၂-မတ်-၂၀၁၁)
နယူးယောက်မြို့ လောကချမ်းသာဘုရားကျောင်း၏ အပတ်စဉ်ပြုလုပ်သော ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၂ ရက် စနေနေ့ ဓမ္မသင်တန်းနှင့် ဆည်းဆာတရားပွဲတွင် (ဆရာတော် အရှင်စက္ကိန္ဒ မအားလပ်သဖြင့် အနတ္တလက္ခဏသုတ်ကို မပို့ချဖြစ်သေးဘဲ) လောကချမ်းသာဆရာတော်က ဓမ္မစကြာတရားတော်အကြောင်း သိမှတ်ဖွယ်ရာများကို ရှင်းလင်း ပို့ချပေး၏။
သင်တန်းပြီးနောက် လောကချမ်းသာ ဆည်းဆာတရားပွဲကို ညနေ ၄ နာရီခွဲမှ ၆ နာရီအထိ ပြုလုပ်ရာ အရှင်ပညာနန္ဒက ‘အသွားလမ်းလား ... အပြန်လမ်းလား’ တရားတော်ကို ဓမ္မဒါနပြု ဟောကြား ချီးမြှင့်သွားခဲ့၏။
“ဓမ္မသင်တန်း မစမီ ‘ဓမ္မစကြာ’ ရွတ်ဖတ် ပူဇော်ကြ”
“အသွားလမ်းလား ... အပြန်လမ်းလား”
Posted by LokaChantha at 4:04 PM No comments:
ဓမ္မာရုံ ယောဂီဆောင် ဆောက်လုပ်ရေး (၉-မတ်-၂၀၁၁)
Removing formwork from the first basement
Posted by LokaChantha at 2:31 PM No comments:
အေဘီဘီအေ ထမနဲပွဲ - ၂၀၁၁ မတ် ၅-၆
အမေရိကန် မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်း၏ ၂၀၁၁ ခုနှစ် (၂၅)ကြိမ်မြောက် ထမနဲပွဲတော်ကို မတ်လ ၅-ရက် ၆-ရက်တို့တွင် လောကချမ်းသာဘုရားကျောင်း၌ ကျင်းပခဲ့၏။
အမေရိကန် မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်း၏ ဝေယျာဝစ္စအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်သူ ဒေါ်လော်ရင်းချင်းနှင့် အဖွဲ့က မတ်လ ၄ ရက် သောကြာနေ့ ညနေ အလုပ်ပြီးချိန်မှ စ၍ လောကချမ်းသာဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ သွားရောက်ကာ ထမနဲထိုးရန်အတွက် ကောက်ညှင်းဆန်များ ရေစိမ်ခြင်း၊ အုန်းသီးများ ခွဲ၍ လှီးခြင်း၊ ဂျင်းများ လှီးခြင်း စသော ကြိုတင် ပြင်ဆင်စရာရှိသည်များကို ပြုလုပ် ဆောင်ရွက်ထားကြ၏။
ဖီလာဒဲလ်ဖီးယားမှ ကိုဇော်ဦး၊ ကိုနေလင်း၊ ကိုထွန်းထွန်းဝင်းတို့လည်း သောကြာနေ့ညမှာပင် ရောက်ရှိလာကြပြီး ဝိုင်းဝန်း ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးကြ၏။
ထမနဲပွဲအလှူရှင်များဖြစ်ကြသော ဒေါ်ပြုံးပြုံးရည်နှင့် မိတ်ဆွေအချို့လည်း သောကြာနေ့ အလုပ်အပြီး လာရောက် ကူညီကြသေး၏။
ထိုကဲ့သို့ သောကြာနေ့ညကတည်းက ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားသဖြင့် မတ်လ ၅ ရက် စနေနေ့တွင် နေ့လယ် ၁၂ နာရီခွဲလောက်မှ စ၍ ထမနဲထိုးပွဲ ဆင်နွှဲနိုင်ကြ၏။
အေဘီဘီအေအသင်း၏ အတွင်းရေးမှူး ဦးစောဝင်းက လုပ်အားပေးမည့်သူများအတွက် နေ့လယ်စာအဖြစ် လှူဒါန်းသော ဆိတ်သားနှင့်ပဲဟင်း၊ ဝက်ခေါင်းသုပ်တို့မှာ အစပ်အဟပ်တည့်လှပြီး ထမနဲထိုးရန် အားအင်တိုးစေ၏။
ဒေါက်တာချိုညွန့်ဝေ၊ ဒေါက်တာဦးသိန်းကြည်၊ ဒေါက်တာသန်းသန်းဌေးတို့၏ ဒိန်ချဉ်မွှေးကလည်း လုပ်အားပေးများကို အမောပြေစေ၏။
ထမနဲထိုးပွဲသို့ အလှူရှင် မြန်မာဇာတိနွယ် ကုလသမဂ္ဂဝန်ထမ်းများ၊ မြန်မာလူမှုရေးအဖွဲ့(နယူးယောက်)သူ အဖွဲ့သားများ၊ မြန်မာဆရာဝန်များ၊ နှစ်စဉ် လာရောက် ထမနဲထိုးလေ့ရှိသူများ လာရောက် ပါဝင်ဆင်နွှဲကြရာ စုပေါင်းဆောင်ရွက်ရသော၊ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု အနှစ်သာရရှိသော ပျော်ရွှင်ဖွယ် ပွဲကလေးတစ်ခု ဖြစ်လေသည်။
မတ်လ ၆ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် မြတ်စွာဘုရားအား ထမနဲဆွမ်း၊ ပန်း၊ ရေချမ်း၊ ဆီမီး၊ ဆွမ်းတို့ဖြင့် ကပ်လှူ ပူဇော်ကြပြီး၊ သံဃာတော်များအား နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ် လှူဒါန်းကြ၏။
ကြွရောက်လာကြသော ပရိသတ်များအားလည်း အာပူလျှာပူ၊ ထမနဲ၊ မြန်မာလက်ဖက်ရည်တို့ဖြင့် ကျွေးမွေး ဧည့်ခံကြသည်။
မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် လောကချမ်းသာဆရာတော်က အနုမောဒနာတရား ဟောကြား ချီးမြှင့်ပြီး၊ ဘုန်းကြီး ဦးအဘယာလင်္ကာရက ရေစက်ချအစီအစဉ်ကို ဆောင်ရွက်ပေးကာ ကောင်းမှု ကုသိုလ် အစုစုတို့ကို အမျှပေးဝေကြ၏။
ထမင်းနှဲ ..... ထမနဲ ..... ယာဂု ..... နှမ်းမနဲ
ထမင်းနှဲသည် ကောက်ညှင်းနှင့် စီမံ ပြုလုပ်သော မြန်မာတို့၏ ချိုဆိမ့်မွှေးသည့် စားစရာတစ်မျိုး ဖြစ်သည်။
ကောက်ညှင်းထမင်းကို ထပ်ပြန်တလဲလဲ ကော်များ၊ ပတ်စာများ နှဲဘိအလား နှဲရသောကြောင့် ‘ထမင်းနှဲ’ဟု ခေါ်သည်။
ယင်းကို အရပ်ဒေသလိုက်၍ ‘ယာဂု’ဟုလည်း ခေါ်သည်။
‘ယာဂု’မှာ ပါဠိစကားဖြစ်၍ မြန်မာလို ‘ဆန်ပြုတ်’ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။
ကောက်ညှင်း၊ အုန်းသီး၊ မြေပဲ၊ ဂျင်း၊ နှမ်းဆီနှင့် နှမ်းနိုင်နိုင် ထည့်ရသောကြောင့် ‘နှမ်းမနဲ’ဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။
ကောက်ဦးပေါ်ချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြား ကျေးလက်တောရွာများအထိ ထမင်းနှဲထိုးပွဲများ ဆင်ယင် ကျင်းပကြသည်။
ဆယ့်နှစ်ရာသီပွဲတော်များအနက် တစ်ပွဲ အပါအဝင်ဖြစ်သော ယင်းပွဲတော်ကို တပို့တွဲလဆန်းမှ စ၍ လပြည့်နေ့အထိသော ကာလအတွင်း၌ ရှေးမင်းအဆက်ဆက်မှ ဆင်းသက်၍ အမြို့မြို့အရွာရွာတွင် ခြိမ့်ခြိမ့်သဲမျှ ကျင်းပကြသည်။
“တပို့တွဲလ၊ ကုံသို့ကျ၊ မာဃ ထွန်းစမြဲ၊
ပေါက်လဲပွင့်တုံ၊ ဆူးပန်းငုံ၊ မီးပုံ ယာဂုပွဲ”ဟု စပ်ဆိုကြသည်။
ထည့်သောပစ္စည်းများ အချိန်အဆ မှန်၍ အထိုးနိုင်က ထမင်းနှဲသည် အလွန်စားကောင်းရုံမက ရက်ရှည်လည်း အထားခံသော အစာဖြစ်သည်။
ထမင်းနှဲထိုးသည့်အခါ ထည့်သည့် အချိန်အဆများကို အောက်ပါ တေးထပ်မျိုးဖြင့် စပ်ဆိုထားခဲ့ကြသည်။
ယာဂုတော် ကြိုဆောင်သည့် ပွဲ။
ဂျင်းနုဖတ် သိင်္ဂီမျှင်ရွှေ သုံးကျပ်မသွေ
အထက်ပါ တေးထပ်အရ ထမင်းနှဲထိုးလိုမူ -
ကောက်ညှင်းဆန် လေးပြည်ကို ရေစင်အောင် ဆေး၍ ဆီတစ်ပိဿာကို ဒယ်တွင် ထည့်ကာ ဂျင်းသုံးကျပ်သားနှင့် ဆီသတ်၍ ကောက်ညှင်းထည့် နှပ်ရသည်။
ကောက်ညှင်းနပ်၍ ဆီပြန်သော် ဖိုမှ ချ၍ နှဲရသည်။
ယင်းသို့ နှဲရာတွင် ယောက်မနှစ်လက်နှင့် ပွတ်ခြေသဖြင့် ကြေသွားသော ကောက်ညှင်းတွင် မြေပဲ ၈၀ ကျပ်သား၊ နှမ်း ၃၂ ကျပ်သား၊ အုန်းသီးစိပ် ၂၀ ကျပ်သား၊ ဆား ၇ ကျပ်သား နှံ့အောင် ထည့်၍ မွှေလျှင် ထမင်းနှဲ ဖြစ်သည်။
ထမင်းနှဲသည် အပူစာချည်း ပါ၍ ဆီနိုင်သော အစာဖြစ်သဖြင့် အလွန်ချမ်းသည့် တပို့တွဲလမျိုးတွင် ထိုးပွဲကျင်းပ၍ စားကြသည်ဟု ဆိုကြသည်။
အလွန်အေး၍ အဆီခြောက်ခန်းချိန် ဖြစ်သဖြင့် ဆီနိုင်သော ဤထမင်းနှဲကို စားသုံးလျှင် စိုပြေလာ၍ အပူဓာတ်ရလာသည်ဟု အယူရှိကြသည်။
မဟာနရီကွန်ချာဆေးကျမ်း၌မူ ပထဝီပျက်သူများ ထမင်းနှဲစားသင့်သည်ဟု လာသည်။
Posted by LokaChantha at 12:04 PM No comments:
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၊ ၂၆-၂၇ ဓမ္မသင်တန်းနှင့် ဆွမ်းအလှူများ
နယူးယောက်မြို့ လောကချမ်းသာဘုရားကျောင်းတွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ ရက် စနေနေ့၌ ဆရာတော် အရှင်စက္ကိန္ဒက ဓမ္မစကြာသင်တန်းကို အပြီးသတ် ပို့ချပေးပြီး၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက် စနေနေ့တွင် အနတ္တလက္ခဏသုတ်တော်ကို ပို့ချပေး၏။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ ရက် စနေနေ့ ဓမ္မသင်တန်း
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက် စနေနေ့ ဓမ္မသင်တန်း
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက် စနေနေ့ နေ့ဆွမ်းကို ဒေါက်တာဗစ်တာဝင်းအောင်၊ ဒေါ်ညိုညိုဝင်း မိသားစုနှင့် မိတ်ဆွေမိသားစုများ, မိတ်ဆွေများက ကွယ်လွန်သူ ‘Anthony’, ‘ဦးမြင့်ဇော်’, ‘ကိုဝေဖြိုးလွင်’, ‘ကိုပြည့်စုံ’, ‘ဦးတင်အောင်ခင်’တို့အား ရည်စူး၍ ဘုရားအမှူးရှိသော သံဃာတော်များအား ကပ်လှူ ပူဇော်ကြ၏။
လောကချမ်းသာဆရာတော်က ဆွမ်းအလှူ အနုမောဒနာတရား ဟောကြား၏။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ကွယ်လွန်သူ အမေရိကန် မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်း ဥက္ကဌ ဦးဟန်ကြူ (၁၉၃၃-၂၀၀၇)၊ သိရီသုဓမ္မမဏိဇောတဓရ-မြန်မာနိုင်ငံ (၂၀၀၂)၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်-အာရှနှင့် ပစ္စဖိတ်နွယ်ဖွား နယူးယောက်မြို့တော်သားများ (၂၀၀၃) ၏ ကျန်ရစ်သူ ဇနီး ဒေါ်ခင်ဝါကြူ၊ သားသမီးများဖြစ်ကြသော ဒေါ်ဌေးဌေးဝင်း၊ ဦးသိန်းဝင်း-ဒေါ်စန်းစန်းဌေးဝင်းမိသားစုတို့က ဦးဟန်ကြူကွယ်လွန်ခြင်း ၄-နှစ်ပြည့် ရည်စူး၍ ဘုရားအမှူးရှိသော သံဃာတော်များအား နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ် လှူဒါန်းကြပြီး၊ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်ဝါကြူက နယူးဂျာစီ၊ မဟာစည်သတိပဋ္ဌာန်ရိပ်သာ၊ ဓမ္မာရုံ ယောဂီဆောင် ကျောင်းဆောင်တော်ကြီးအတွင်း ဘုရားခန်းမအတွက် အလှူတော်ငွေ ဒေါ်လာတစ်သိန်း လှူဒါန်းရာ၊ ပထမဦး အရစ်ကျ ဒေါ်လာတစ်သောင်းကို ရေစက်ချ လှူဒါန်းသွား၏။
လောကချမ်းသာဆရာတော်က ဆွမ်းအလှူ၊ ကျောင်းအလှူ အနုမောဒနာတရား ချီးမြှင့်၏။
Posted by LokaChantha at 1:00 PM No comments: